Dugsiyada Sare ee Gambool, Bossaso secondry, Imaamu-shaafici iyo Al-waaxa oo xalay ku kulmay miiska aqoonta ee Daljir. – Radio Daljir
Dugsiyada Sare ee Gambool, Bossaso secondry, Imaamu-shaafici iyo Al-waaxa oo xalay ku kulmay miiska aqoonta ee Daljir.
Bossaso, Aug, 04 – Tartankii xalay oo ahaa mid aad u xiisa badan ayaa waxaa qaybtii hore ku hardamay dugsiyada sare ee Bossaso secondry iyo Gambool Garoowe waxaana dugsi walba la waydiiyey 6 su?aalood. Dugsiga Gambool ayaa ka jawaabay dhammaan su?aalihii la waydiiyey waxaana uu sidaasi ku helay 12 buundo, halka Bossaso secendry uu ka jawaabay 5 ka mid ah su?aalihii la waydiiyey halkaasna uu ku helay 10 buundo. Waxaana sidaasi guushu ku raacday dugsiga Gambool ee magaalada Garoowe.
Dugsiga Gambool waxa uu sidaasi ku leeyahay 3 dhibcood halka Bossaso Secondry uusan waxba lahayn, Labadan dugsi waxay ay ku wada jiraan Group-ka C waxaana mid kasta u haray labo tartan oo kale.
Waxaa tartan kaas la mid ah uu qaybtii dambe ee barnaamijka dhexmaray dugsiyada sare Al-waaxa Garoowe iyo Imaamu-shaafici Bossaso waxaana uu dugsi walba ka jawaabay 5 ka mid ah su?aalihii la waydiiyey iyo min hal su?aal oo ka faa?iidaysi ah, sidaas darteed mid kasta waxa uu helay 11 buundo waxay sidaasi ku galeen bar-bar dhac.
Labadan dugsi waxay ku wadajiraan Group-ka D waxaana uu mid kasta leeyahay hal dhibic, waxaana u haray min labo tartan oo kale.
Afartaan dugsi ee xalay tartamay ayaa soo bandhigay Tartan aad u qurux badan oo xirfad firfircooni ku dheehantahay, waxayna ka mid yihiin 24 dugsi sare oo ku yaalla deegaanada Puntland oo ka qaybgalaya barnaamijka Tartan iyo Tacliin ee Radio Daljir.
Qabashada barnaamijkan waxaa iska kaashanaya Radio Daljir, shirkadda isgaarsiinta ee Golis, Daladda waxbarashada ahliga ah ee Pen iyo wasaaradda waxbarashada ee Puntland.